कांग्रेस र गठबन्धन गरेको एमालेलाई टक्कर दिने को हुन् उमेश यादव?
तराई राजनीतिका अधिकांश नेता नेपाली कांग्रेस पृष्ठभूमिका छन्। विराटनगर उपमहानगरपालिकाका मेयर उम्मेदवार उमेश यादवको पृष्ठभूमि पनि कांग्रेस नै हो। जातीय मुक्ति तथा मधेसी जनताको हकहित निम्ति कांग्रेस तथा एमालेबाट नेताहरूले जब धमाधम विद्रोह गरे, यादव पनि त्यो विद्रोही टिममा मिसिन पुगे।
२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि भएको पहिलो मधेस आन्दोलनमा होमिए। २०४६ सालदेखि नेपाल विद्यार्थी संघमा आवद्ध भएर राजनीति गरिरहेका उनी तराई आन्दोलन हुँदा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरममा आवद्ध भए।
मधेस आन्दोलनपछिको पहिलो संविधानसभा चुनावमा फोरम चौथो शक्ति भएर नेपाली राजनीतिमा उदायो। मधेस आन्दोलनको एउटा प्रमुख क्षेत्र विराटनगरका तीन वटा क्षेत्रमा फोरमले विजय हासिल गर्यो। निर्वाचन क्षेत्रका हिसाबले मोरङका ९ मध्ये चार वटा क्षेत्र फोरमले जितेको थियो। यीमध्ये ५, ६ र ७ नम्बर क्षेत्र विराटनगर महानगरपालिकासँग जोडिन्छन्। यी तीनै क्षेत्रमा आफ्ना उम्मेदवार जिताउन लागेका उमेश त्यही पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको मत र फुटपछि ल्याएको प्रतिस्पर्धी मतको विश्लेषणका आधारमा चुनाव लड्दैछन्।
पहिलो संविधानसभा चुनावमा ५ नम्बरमा उपेन्द्र यादव, त्यहीँ उपनिर्वाचन हुँदा जयराम यादव, ६ मा भीमलाल राजवंशी र ७ मा विजयकुमार गच्छदारले चुनाव जितेका थिए। तर, उपनिर्वाचन हुँदा ७ मा कांग्रेसले जितेको थियो। पहिलो संविधानसभाको दुई वर्षमै फोरम दुईै टुक्रा भइसकेको थियो। मधेस आन्दोलनका दुई सहयात्री उपेन्द्र यादव र विजयकुमार गच्छदार दोस्रो संविधानसभामा अलग–अलग चिन्हमा चुनाव लडे।
विराटनगर महानगरभित्र जोडिएका क्षेत्रहरूमा संविधानसभा दोस्रो निर्वाचन मत परिणाम हेर्दा कांग्रेसपछि शक्तिशाली लोकतान्त्रिक फोरम र फोरम नेपाल देखिएका छन्। ६ र ७ नम्बर क्षेत्रमा संघीय समाजवादी फोरम तेस्रो ठूलो शक्ति बनेको थियो, ५ नम्बर क्षेत्रमा समाजवादी फोरम दोस्रो थियो।
‘हामी एक्लै चुनाव लड्नसक्ने शक्ति हौं,’ यादवको दाबी छ, ‘तैपनि केन्द्रबाट माओवादीसँग चुनावी तालमेल गरिएकाले हामी थप शसक्त भयौं।’ दोस्रो संविधानसभा चुनावका हिसाबले यी क्षेत्रमा माओवादीले ‘हैसियत देखाउन’ सकेको थिएन।
पाँच नम्बर क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका नेता अमृत अर्यालले १५,२९४ मत ल्याएका थिए। उनका प्रतिद्वनद्वी उपेन्द्र यादवले १२,२६६ मत ल्याएका थिए। यो क्षेत्रको परिणाममा नेपाली कांग्रेसलाई संघीय समाजवादी फोरमले टक्कर दिने देखिन्छ।
६ नम्बर क्षेत्रमा महेश आचार्य २२,५५२ मत ल्याएर विजयी भएका थिए। उनका प्रतिस्पर्धी फोरम लोकतान्त्रिकका भक्ति माझीले ७,५६८ मत ल्याएका थिए। यहाँ संघीय समाजवादी फोरम तेस्रो स्थानमा थियो। यहाँ कांग्रेसको प्रतिस्पर्धी लोकतान्त्रिक फोरम देखिन्छ।
७ नम्बर क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका डा. शेखर कोइराला विजयी भएका थिए। उनी १२,९८२ मतले विजयी भएका थिए। उनलाई फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले टक्कर दिएका थिए। गच्छदारले १०,५६४ मत ल्याएका थिए। यो चुनावी मतपरिणामले यहाँ कांग्रेस र लोकतान्त्रिकबीच प्रतिस्पर्धा छ। लोकतान्त्रिकसँगको तालमेलले एमालेलाई ६ र ७ नम्बर क्षेत्रबाट फाइदा पुग्नेछ।
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका मोरङ अध्यक्ष भक्तिनाथ माझी भन्छन्, ‘एमालेसँगको सहकार्यले हामीलाई चुनाव जित्न थप मद्दत पुगेको छ।’
माओवादी र संघीय फोरमका संयुक्त उम्मेदवार उमेश यादव विगतमा ‘टेक्निकल’ कारणले चुनाव हारेको बताउँछन्। परिवर्तनकारी दुई शक्तिबीच भएको चुनावी तालमेलले आफ्नो जित निश्चित भएको उनले बताएका छन्।
‘हामी एक्लैले जित्ने आधार हुँदाहुँदै माओवादी केन्द्रसँग एलाइन्स गर्ने अवस्था आयो। माओवादी केन्द्र परिवर्तनकारी शक्ति हो, संघीय समाजवादी फोरम पनि परिवर्तनकारी शक्ति नै हो। दुबै शक्ति एकठाउँ हुँदा जित्ने सम्भावना झन् बलियो भयो,’ यादवले भने।
विराटनगर–१८ मा २०३१ सालमा जन्मेका यादव २०५३ सालमा एक वर्ष जेल परे। एमाले अखिलसँगको मुठभेडमा एक विद्यार्थी नेताको मृत्युको विषयलाई लिएर उनीमाथि मुद्दा दायर गरिएको थियो। पछि नेपाली कांग्रेस सरकारमा आएपछि उक्त मुद्दा फिर्ता लिइएको थियो।
महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा स्नातकसम्मको अध्ययन गरेका उनले २०५६ सालमा अन्तरजातीय बिहे गरे। सोही विषयमै उनी एक वर्ष काठमाडौं विस्थापित भए। अन्तरजातीय बिहेकै कारण विस्तापित भएको आफैंले भोगेपछि उनमा जातजातिबीचको विभेद अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने चेतना विकसित भएको थियो।
दोस्रो मधेस आन्दोलनसम्म उनी फोरममै रहे। कतिपय नेताहरू कांग्रेसमै फिर्ता भइरहँदा पनि उनी फोरममै सक्रिय भइरहे। दोस्रो मधेस आन्दोलनको विराटनगर परिचालन उनकै नेतृत्वमा भएको थियो।
माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण भएपछि थप उत्साहित भएका उनी भन्छन्, ‘हाम्रो जित सुनिश्चित भइसकेको छ, हामी पाँच वर्षभित्रमा सफा, स्वच्छ र नेपालकै दोस्रो शक्तिशाली सहर बनाउँछौं।’
तल्लो तहका मधेसी जनताको समर्थन, उत्पीडित, दलित तथा आदिवासीको हकहित चाहने सबै वर्गका नागरिकबाट आफूले मत पाउने उनी बताउँछन्। शैक्षिक गतिविधिको केन्द्र, बाटोघाटो निर्माण, खानेपानी सुविधा, औद्योगिक सहर बनाउने एजेन्डा आफूसँग रहेको यादव बताउँछन्।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार ७, २०७४ ०६:४२:२८